DNB oo lagu dacweeyay in qoxootiga uu u diido koonto(xisaab) Banki: Sababtan darteed. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub DNB oo lagu dacweeyay in qoxootiga uu u diido koonto(xisaab) Banki: Sababtan...
Boqolaal oo Norway ka codsaday magangalyo ayaa shaki la galiyaa aqoonsigooda shaqsiyeed ama dalka ay asal ahaan kasoo jeedaan. Waxaana dhacda in marar badan qofka oo wali uu aqoonsigiisu mugdi kujiro, inuu helo magangalyo, balse loo diido waraaqaha safarka ama baasaboorka qoxootiga, maadaama uusan cadeyn aqoonsiga qofka(ID).
Dadkaas waxay Norway ku heystaan magangalyo sharci ah, waxaa loo ogolyahay inay shaqeystaan, canshuur bixiyaan ama ay u noolaadaan nolosha sida dadka intiisa kale ee Norway kunool, marka laga reebo ineysan heysan waraaqaha safarka.
Dadkaas waxaa kamid ah Aso Ibrahimi oo asal ahaan kasoo jeedo dalka Iiraan, Norwayna ka helay magangalyo. Wuxuuna heystaa shaqo buuxdo(Fast), isaga oo ah canshuur bixiye. Ibraahim oo ah Kurdi Iiraani ah ayaan wadan aqoonsi shaqsiyeed markii uu Norway imaaday, saas oo taheyna hey´addaha qoxootiga Ibraahim siiyeen magangalyo. Dhanka kale waxey diideen in Ibraahim ay siiyaan waraaqo safar(Baasaboor qoxooti) oo uu ka dhigan karo aqoonsi shaqsiyeed, iyaga oo sheegay in aqoonsiga shaqsiyeed ee ninkan uusan si fiican u cadeyn.
DNB: Koonto kuuma furi karno
Inkasta oo Ibraahim uu sadex sano ah oo xiriir ah shaqeynayay, hadana waxaa wali dhibaato ka heysataa inuu helo xisaab(koonto) ay ugu soo dhacdo ama loogu soo diro mushaarka uu shaqeysto. Maadaama Bankiga DNB iyo bankiyada kale ee Norway ay diiideen in ibraahim uu u furaan koonto, iyaga oo ku sababeynayo in Ibrahim uusan wadan wax cadeynayo aqoonsigiisa shaqsiyeed. Taas oo qasab ka dhigtay in Ibraahim uu koontada saaxiibkiis kusoo dirsado lacagta mushaarka shaqada.
DNB ayaa sabab ka dhiganayo in qof walba oo macaamiil ka ah bankigooda uu heysto aqoonsi shaqsiyeed oo cadeynayo asalkiisa iyo macluumaadkiisa shaqsiyeed, taas oo raacfan shuruucda bangiyada maaliyada Norway. Waxeyna sheegeen ineysan koonto u furi karin, qof aan heysan aqoonsi shaqsiyeed(ID).
Hey´adda sinaanta iyo kahortaga faquuqa ayaa DNB ka gudbisay dacwad la xiriirta faquuq iyo kala soocis, waxeyna DNB ku eedeeyeen inay si gaar ah u faquuqayaan qoxootiga qaarkood.
DNB ayaa dhankooda sheegay in hadii dowlada Norway iyo hey´addaha qoxootiga ay xaqiijin waayeen aqoonsiga dadka qoxootiga ah qaarkood, aysan iyagu banki ahaan arrintaas awoodin, tabarna u laheyn. Ayna raacayaan oo kali ah sharciga Norway ee waajib yeelay in qofka macaamiilka ah uu aqoonsi wato, marka uu xisaab furanayo.
Xigasho/kilde: DNB nekter Aso Ibrahimi å opprette konto. Ombud anklager banken for å diskriminere flyktninger..
Previous articleKosovo: Norway ayaa nagala soo xiriirtay soo gacan-galinta nimanka ku eedeysan dilka Xamse.
Next articleHaweenay ka shaqeyso NAV oo loo xukumay inay galmo ahaan uga faa´iideysatay nin qoxooti ah.